musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Emirates neGulf Air: Hapasisina makwikwi?
Airlines • avhiyesheni • Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • UAE Kuputsa Nhau
Emirates inoshanda kubva kuDubai, UAE, ukuwo Gulf Air ine muzinda kuBahrain. Vese vatakuri vari kuvimba nekufamba kwekufambisa. Chiratidzo chekutanga chekushandira pamwe uye pamwe zvimwe chiri kubuda kuDubai Airshow.
Emirates neGulf Air dzakasaina Memorandum of Understanding (MoU) yekuvandudza kudyidzana kwakadzama kwekutengeserana pakati pevatakuri vese.
Iyo MoU ichaisa hurongwa pakati pevatakuri vese kuti vagadzirise mukana wekubatirana codeshare mumatiweki eimwe neimwe yendege, ichiwedzera mabhenefiti ekuvimbika paEmirates'Skyward neGulf Air's Falconflyer.
Nhaurirano dziri kuenderera mberi kuti dzitange kudyidzana kwekutakura zvinhu.
Yakasainwa pazuva rekutanga reDubai Airshow, iyo MoU icharatidza kutanga kwehukama hwepedyo pakati pendege mbiri. Iyo MoU yakasainwa naSir Tim Clark, Mutungamiriri weEmirates Airline uye Gulf Air's Acting Chief Executive Officer Captain Waleed AlAlawi. Mhemberero dzekusaina dzakapindwawo nenhengo dzezvikwata zvevakuru vekambani imwe neimwe yendege.
Vatengi vanofamba nendege dzeEmirates neGulf Air vanogona kubhuka rwendo rwetiketi rimwe chete nemari inokwikwidzwa, uye kutakura bhegi kuenda kunzvimbo dzavo dzekupedzisira. Emirates ichatanga yaisa "EK" kodhi yayo yakashambadzirwa paGulf Air inoshanda nendege pakati peBahrain neDubai, uye nekudzoka, Gulf Air ichawedzera yayo "GF" kodhi kodhi kuEmirates nzira.
Sir Tim Clark, Mutungamiri we Emirates Airline yakati: "Tinofara kubatana neGulf Air mukugadzira chibvumirano ichi checodeshare, icho chinozopa vatengi sarudzo dzakasimbaradzwa, zvirongwa zviri nyore, uye kuchinjika kwekubatana pakati peDubai neBahrain, uye mhiri kumaguta mune yedu yakakura-haul network. . Tinotenda kuti kudyidzana kwedu kutsva kuchaunza mabhenefiti chaiwo kune vatengi vedu nebhizinesi, uye chibvumirano chanhasi idanho rakanaka mukushandira pamwe kwedu, uye tiri munzira yekusimbisa hukama hwedu mune ramangwana.
Munguva yechiitiko, Gulf Air's Acting Chief Executive Officer akati: "Uku kuchave kudyidzana kunoshamisa pakati peimwe yendege dzekutanga mudunhu reGulf uye imwe yevatakuri vakuru munyika. Tinodada nekuongorora mikana neEmirates yekuwedzera kusvika kwedu uye panguva imwe chete tichiwedzera maboutique masevhisi kune vafambi veEmirates pavanenge vachibhururuka netiweki yedu. Gulf Air neEmirates dzinoshandisa ndege dzakawanda pakati peBahrain neDubai uye chibvumirano ichi chinopa vafambi sarudzo dzakawanda kupfuura nzvimbo dzedu. "
Kana iyo codeshare ichinge yavhurwa, vatengi vanozokwanisa kubhuka mafambiro avo nendege dzese dziri mbiri emirates.com uye gulfair.com, kuburikidza nemasangano ekufambisa epamhepo pamwe nevamiriri venzvimbo dzekufambisa.